Mashruucyada ugu fiican ee DIY elektarooniga iyo robotikada - Ikkaro
Waxaan isku dayi doonaa inaan talaabo talaabo uga qaadno barashada elektarooniga iyo aaladaha casriga ah DIY casharrada. Tani waa adduun naftiisa u gaar ah. Runtii adduunyo kala duwan, elektaroonig elektaroonig ah, awood, aalado, aalado, iwm. Beero badan oo leh xuduudo wadaag ah.
Maalmahan, mashruuc kasta oo DIY ah ama fudge guriga lagu sameeyo, waxay ku dhowdahay in la isticmaalo qayb elektiroonig ah sidaa darteed waxaan isku dayi doonnaa inaan baranno oo aan barno elektaroonigga.
Waxaan diirada saareynaa mashaariicda ugu dambeysa mana sharxeyno qalabka elektarooniga guud, wax walbana waxay noqon doonaan kuwo la taaban karo Haddii aad rabto inaad diirada saarto barashada elektarooniga fiiri koorsooyinka korantada oo bilaash ah
Waxaan rajeynayaa inaad sida xiisaha leh aad u xiiseyneyso mowduucyada.
Dib u habeynta macluumaadka shabakada waxaan ogaaday in a Yotube video taxane taxane ah oo ku saabsan korantada in aan ku daabacay qaabka qoraallada (waxay ahaayeen "Casharrada Farsamada"), casharro taxane ah oo lagu bilaabayo elektaroonigga oo aan aad u jeclaa waqtigaas) ayaa laga saaray kanaalka iyadoo laga dhigayo in qoraalladu aan la isticmaali karin. Waa inaad aragto xaddiga fiidiyowyada, xiriiriyeyaasha, feylasha iyo qodobbada lumaya waqti ka dib. Markaad fiiriso ku dhowaad 11 sano ee qorista, xaddiga macluumaadka ku lumay internetka waa bahal dhab ah.
In wax walba la xakameeyo oo la helo dhammaan casharrada lagu barto elektaroonigga la heli karo, waxaan ku soo ururinayaa liistadaan Waxaan cusbooneysiin doonaa xilliyo, labadaba in lagu daro ilo cusub iyo in meesha laga saaro kuwa sii luminaya ama aan xiiso badan lahayn.
Meter-mitir loogu talagalay kuwa sameeya, Mastech MS8229
Multimitirrada waa saaxiibadeena weyn. Haddii aad tahay Sameeye, waxaad jeceshahay inaad jilciso ama aad rabto inaad dayactirto qalabka iyo aaladaha waxaad u baahan doontaa mid. Haa, haddii aad isticmaasho Arduino sidoo kale.
Marar badan, gaar ahaan dadka bilaabaa ma yaqaanaan multimeter-ka ay iibsanayaan oo ka dooro mid aad u jaban noocyada ama dukaanada Shiinaha, oo ka yar € 10. Laakiin kuwani waxay u muuqdaan inay si dhakhso leh u dhacaan, gaar ahaan haddii aan jecel nahay waxa aan sameyno oo aan wax badan u isticmaalno.
Talada maanta, waa mitir mitir 50. ah taas oo suurtagal ah inaysan ahayn multimeter-ka ugu wanaagsan ee qiimadan, laakiin waxaan u dooranay hawlo badan oo dheeri ah oo ay leedahay. Waa a 5 1 XNUMX qalab taas oo ka farxin doonta dhamaan taageerayaasha isku soo uruurinta iyo kala goynta waxyaabaha. Laakiin ha ku qaldan in uusan aheyn tijaabo xun oo € 50 waxaan heysanaa qalab mudo ah.
Qalabka muusikada Micro-Micro ee leh raadiyaha FM iyo MP3 ee SD iyo USB
Iyada oo ay ku jiraan kartoon, module-ka MP3-ka-guddi ah, ku hadla dib loo rogay iyo batteri (wax gaar ah), Akhri akhriska
Sahay fudud oo fudud
La korantada waa cunsur aasaasi u ah taageere kasta oo ka mid ah shirarka elektarooniga ah.
Midkan aan kuu soo bandhigayo waxaa lagu sameeyay qaybo aad u yar, qaarkood dib loo warshadeeyay. Waxaa lagu uruuriyaa daqiiqado yar, waxayna u oggolaaneysaa in la helo danab kasta oo u dhexeeya 3 iyo 34 volts, (in ka badan ama ka yar).
Sida loo sameeyo nalalka Kitt (Gaariga Fantastic)
Waad salaaman tihiin, aad baad ugu mahadsan tihiin inaad na aqrisay. Markan waxaan ku bari doonaa dhaqan aad u sharrax badan oo aad la taaban karo. Qaar badan oo ka mid ah dhaqamada ayaa kaliya lagu arki karaa aaladaha wax lagu cabiro, tan waxaa lagu arki karaa LED-yada.
Ka fikir bandhiga 80-meeyadii iyadoo boolis la jaray, halyeeyo isboorti iyo gaari aan caadi aheyn oo nalalka aan caadiga aheyn ku horyaalaan, maxaa yeelay taasi waa taxanaha. Kitt, gaariga cajiibka ah
Hadda aan aragno sida loo sameeyo nalalka Kitt, gaariga cajiibka ah leh LED-yada si aad ugu isticmaali karto gaarigaaga ama gurigaaga. Digniin ahaan maahan wax dhib ah gebi ahaanba, halkan Ikkaro waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo iyadoo la isticmaalayo lacag yar iyo waqti gaaban. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay
Sida loo sameeyo Ilaha Wareegsan +5, +12, -12 ee loogu talagalay mashaariicda mustaqbalka ee leh DVD
Waad salaaman tihiin. Tani waa maqaalkeygii ugu horeeyey. Markaan arkay in tifaftireyaasha kale ay soo bandhigayaan waxyaabo aad u xiiso badan, waxaan u maleynayaa inay caqli gal tahay in la caddeeyo in aan fahamsanahay in dhammaantood aysan ku takhasusnayn aagagga gaarka ah ee injineernimada. Tan darteed iyo mahadsanid xaqiiqda ah in mashaariic aad u dhameystiran ay imanayaan, waxaan ku bilaabi doonnaa qalab kaa badbaadin doona xoogaa yar oo euro ah dib-u-warshadeyn, yareyn iyo adigoon guriga ka bixin.
Fikraddu waxay ku dhalatay maxaa yeelay waxaan iibsaday DVD rakhiis ah (in ka yar € 35) laakiin si fiican ayey u shaqeysay muddo 3 bilood ah meelna kama ay soo jeesato oo waxay dhahdaa "No disk", tani waa dhibaato wadajirka ah ee kaarka caqliga, taas oo gebi ahaanba waa dijitaal, maahan wax sahlan in la dayactiro sidaa darteed waxtar ma leh. Waxaan ka fikiray maalin uun ficil aan ugu baahday ilo ka weyn 1 Amp, waxaan xasuustay DVD-ga oo halkan waa dhismihiisa. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay
Waxaan ku bilaabi doonnaa inaan ogaanno waxyaabaha aan adeegsan doono, wax walba waxay ka muuqdaan sawirka, marka laga reebo taliyaha iyo hagaajinta, waad arki doontaa waxa loo isticmaalay.
Waxaan qaadaneynaa kala-baxa oo waxaan ka saari doonnaa dhammaan wiishashka dhinacyada, ma ahan wax adag in la helo, tan iyo markii ay soo if baxeen, halkan waa sawir.
Si fudud ku xir fiilooyinka batteriga
Xaqiiqdii in kabadan hal munaasabad waxaad rabtay inaad isticmaasho batariga caadiga ah, AA, AAA ama ... Akhri akhriska